PUNTLAND:Waxa Ka Dhacay Hargaysa iyo Xamar Toona Kama Dhicin, – KHAATUMO NEWS
PUNTLAND:Waxa Ka Dhacay Hargaysa iyo Xamar Toona Kama Dhicin,
Dalkeena Soomaaliya Caasimadiisu Waxaa xamar madaxda Dawlada soomaaliya iyo Hanaanka Dawladeed ee ka jira waa mid ay Dhinac taagan yihiin Dawlado kale waana mid amaankiisu uu yahay Mid gacanta ay ku hayan Kumanaan ajaanib ah.
Hargaysa iyana waa caasimada Labaad ee Soomaaliya balse waxaa ay haysata amaan aan La tijaabin oo aysan tijaabin ama maysan kulmin madax heer caalami ah oo ka baxsan Shaqsiyaadka Ka madaxda ah Somaliland iyo safiiro mudo saacado ah jooga.
Garoowe oo Ah caasimada Maamulka puntland waxaa ay isku wada maalinta bari ah oo ku beegan 26 bishan in ay xidho ama dhigto casharo aysan bixin dawlada soomaaliya iyo maamul kale oo ka jira soomaaliya.
Marka hore xaflada bari ee Garoowe Waxaa laga Bartay oo ninkii aan ogayn ogaaday in puntland taladeeda ay gacanta ku haysato oo Cid kasta oo soomaali ah ay marti galinkarto sida ay hada u marti galiyen siyaasiyiin iyo madax aad u kala fog.
Marka aan ku leeyahay Talada Puntland waxaa ay gacanta ugu jirta reer puntland waxaa jawaab cad kugu filan Baydhabo waxaa ka dhacday caleema saar iyo doorasho an kulmin inta badan soomaalida madaxdeeda.
Marka labaad waxa laga baranaya xaflada Bari Ee garoowe Caleema saarka deni in puntland leedahay amni Ay gacantiisa ku hayan ciidamo reer puntland ah iyagoo kaashanaya ilaahay balse aan gacan iyo garab toona ka helayn cidan shisheeye ah kuna shaqeeyneen talo cid kale .
Marka ma la odhan Kara Garoowe ama puntland Soomaaliya waxa ay bartay wax aysan Hore uga filayn iyo in soomaali dhexdheeda hadii ay is aaminsan tahay iyadu aanay u baahneen Ciidamo ajanabi ah.
Previous Post: DAAWO VIDEO:-Siyaasi caan ah oo qirtay in uu tuug ahaan jiray!
Next Post: Somaliland Yaa U Jooga Xaflada Caleema Saarka Garoowe?